CD'n Albama Artiist Haacaaluu Hundeessaa gara miiliyoona walakkaatti dhiyaatu qophaa'u ibsame
5 months, 1 week ago 1493 Qoodi
Artiistii beekamaa fi jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa Albamii isaa otoo lubbuun jiru hojjete walitti qabuudhaan maatii fi hiriyootni isaa guyyaa yaadannoo ajjeefamuu isaa waliin wal qabsiisuun uummataaf akka ifa ta’u murteessuu isaani ibsa har'a Waxabajjii 25, 2021 miidiyaaleef laataniin beeksisaniiru.
Eebbi albamii "Maal Mallisaa" fi yaadannoon waggaa tokkoffaa ajjeefamuu isaa Wiixata dhufu Waxabajjii 28, 2021 sagantaa guddaan bakka keessumootni kabajaa, maatii fi jaallatootni isaa argamanitti Finfinnee Hoteela SkyLight keessatti akka geggeeffamu koreen eebba Albamii Hacaaluu fi maatii ibsa har'a laataniin beeksisaniiru.
Artiist Haacaaluun dargaggeessa lafaa dhufaa aartii Oromoo keessatti dhiibbaa olaanaa uumuu danda’ee fi seenaa qabsoo Oromoo keessattis gumaacha olaanaa qabudha. Maatii fi jaallattoota isaa dabalatee ummanni Oromoo Artistii qaalii kana erga of biraa dhabe waggaan tokko lakkawameera.
Haacaaluun yeroo lubbuun jiru albamii guutuu lamaa "Sanyii Mootii" fi Waa'ee keenya" jedhan akkasumas sirboota qeenxee kan akka "Nan himaa (Oromiyaa)", “Maasaan gamaa’’, ‘’Maalan jiraa’’ fi ‘’Jirra’’ jedhan gurra uummataan gaheera.
Haacaaluu seenaa keessatti kan isa hin irraanfachisne ammoo bara rakkoo uummanni Oromoo mootummaa darban wajjiin morma wal qabee ture, uummata Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa’an sababeeffachuun konsartii qophaa’e irratti onnee guutuudhan gootummaan gidiraa uummata isaa geerarsa ajaa’ibaan samii fi dachii raase. Geerarsi isaa “Jirtuu” jedhu gidiraa uummataa kan ibse qofa osoo hin taane uummatni gidiraa isaa akka obbaafatu kallattii qabsoos kan akeeke, kan yoomuu hin dagatamne ture.
Hacaaluun jaalala uummata isaa otoo dhamdhamee hin quufiin, fuulduraaf waltajjii addunyaa irratti sagalee saba isaa ta’uu otoo danda’uu Waxabajjii 29, 2020 magaalaa Finfinneetti gara jabinaan ajjeefame.
Erga Hacaaluun darbe hojiilee isaa yeroo lubbuun ture hojjete ture kana maatii fi hiriyootni isaa bakka inni jiru hundumaa walitti qabuudhaan waggaa tokkoof erga irratti hojjetanii booda, guyyaa yaadannoo lubbuun isaa dabarteef akka qaqqabu taasisaniiru.
Albamiin haaraa Hacaaluun hojjete 3ffaan mataduree ‘‘Maal Mallisaa’’ jedhuun walleelee 14 kan qabu yoo ta’u dhimmoota Oromummaa, jaalalaa, gootummaa, hawaasummaa, jaalala maatii, haadha warraa fi daa’imaa fi kkf of keessatti kan hammatedha.
Albamiin kun CDdhaan gabaatti dhiyaachuuf qophaa’eera. Biyya keessatti CDn gara walakkaa miliyoonaa ykn 500,000 dhiyaatu qophaa’eeera. Biyyoota alaatti ammoo ‘online’ gama Amazon, itunes, Spotify fi kkf irratti gurguruuf qophaa’eera.
Kana malees hojiilee Haacaaluu uummata biraan gahuu fi kallatti odeeffannoo madda tokkorraa taasisuuf akkasumas galii achirraa argamu irraa maatiin akka fayyadamuuf yaadamee toorri miidiyaalee hawaasaa garaagaraa banamee hojiitti seenameera. Isaan keessaa yeroo ammaa fuula Feesbuukii fi Yuutubiin maqaa isaan banamee fi maatiin hogganamu hojiirra ooleera.
Albamni Hacaaluu 3ffaan biyya keessatti guyyaa Wiixataa irraa eegalee godinaalee Oromiyaa, Finfinnee fi naannolee biraatti raabsuuf qophiin kan xumurame yoo ta'u, uummanni hojiilee isaa haala gaariin hojjetame kana CD orijinaala bituun, warri toora interneetaa fayyadamanis achirraa qofaa bitanii dhaggeeffachuun amanamummaa Haacaaluuf qaban akka agarsiisan maatiin hubachiiseera.
Akkasumas ummanni namoota CD haaraa 3ffaa kana karaa seeraan alaa irraa fayyadamuuf socho’an yoo arge eeruu akka kennuu fi qaamolee seeraatti akka beeksisu gaafatameera.
Maddi: Hachalu Hundessa (FB page)
Muuziqaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa Maal Mallisaa
Albamni Artiist Haacaaluu Hundeessaa 'Maal Mallisaa' badhaasa Grammy 2022'f kaadhimame
4 Lammaa Magarsaa: OBN sagalee Obboo Lammaa ugguruun gaazexeessitoota mufachiise
5 Naannoo magaala Maqalee xiyyaara waraanaa fayyadamuun boombiin haleelame
6 Dhaddacha: "Yeroo lammataaf shororkeessummaan himatamuu kootti nan boona" – Jawaar Mohaammad
7 Obbo Lammaa Magarsaa tibbana VOA Afaan Oromoo waliin gaaffiif deebii taasisaniiru?
8 Injinar Taakkalaa Uumaan aangoo akka gadhiisan murtaa'e
9 Bara barnoota Dhaabbilee Barnoota Olaanoo gara 2013 darbu danda'a jedhame